Samarekha.com.np :: जात नमिलेपछि बलात्कार आरोप |
जात नमिलेपछि बलात्कार आरोप
गिरिराज नेपाली || 121 Views || Published Date : 21st June 2021 |
दलितले प्रेम गर्दा ज्यानै गुमाउनुपर्ने, सजाय भोग्नुुपर्ने अझै रहेकाले दलित समुदायप्रतिको गैरदलितहरुको यस्तो गर्दा पनि दलित न्याय पाउनुको साटो उल्टै झुठो आरोप सहनुपर्ने बाध्यता खेप्नु परेको
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १० का २१ वर्षीय राजु बिक र सोही ठाउँकी १८ वर्षीया आयुशा महराले गत बैशाख २२ गते भागी विवाह गरे । उनीहरुबीच केही समयअघिदेखि प्रेम सम्बन्ध थियो । त्यो सम्बन्धलाई उनीहरुले बैवाहिक जीवनमा परिणत गरे । राजुले आयुशाको सिउँदो पनि भरे तर दलितसँग बिहे गरेको भन्दै महराका परिवारले राजुलाई स्वीकार गरेनन् ।
बैशाख २४ गते आफन्तहरु जम्मा भई, राजुको घरमा आए, आयशालाई लिएर गए । राजुलाई छोरीको उमेर पुगेको छैन भने । घरमा लगेपछि आयुशाको अन्त बिहे गरिदिने कुरा चल्यो । त्यो उनले मानिनन् । आयुशाले जात होइन प्रेम खोजिन् । बैशाख २७ गते करिब बिहान ३ गते आयुशा घरबाट भागेर राजुको घरमा आइन् । उनको परिवार बिहान फेरि राजुको घरमा पुगे । परिवारले छोरी जाम बस्ने हैन यहाँ भने तर राजु र आयुशाले नछुट्टिने निधो गरे ।
गाउँका भद्रभलाद्मी भेला भए छलफल गरे तर आयुशा राजुसँगै बस्ने निचोडमै पुगिन् । आयुशाका आफन्तहरु त्यहाँबाट फर्किए । केही दिनपछि राजुको घरमा प्रहरी पुग्यो । केही कुरा गर्नु छ भनी उनीहरुलाई लिएर आयो । अन्त्यमा दलितसँग बिहे गरेको भनी आयुशाका परिवारले राजुलाई जबर्जस्तीकरणी गरेको आरोप लगाउँदै प्रहरीमा निवदेन दिए । त्यही निवेदनले आयुशा र राजुलाई छुटायो । राजु प्रहरी हिरासतमा छन्, आयुशा परिवारसँग छन् ।
यो घटना दाङको घोराही–१० लमडरुवाको हो । गैरदलित केटीले दलित केटासँगको प्रेम सम्बन्धका कारण विवाह गर्दा केटा र उनको परिवारले भोग्नुु परेको अनाहकको सजाय हो । राजुकी आमा बेलु बिकले भनिन, ‘खोसेर लगे उनी फेरि फर्केर आफै आइन्, अहिले छोरालाई जालझेल गरी जेलमा कोचे । जात नमिल्नेसँग कसरी घरजम गर्न दिने भनी यस्तो गरे ।’
केटीका आफन्तहरुले छुटाउन अनेकौं प्र्रयास गरे पनि छुटाउन नसक्दा झुटो आरोप लगाएर छोरालाई मुद्दा लगाएको पीडित आमाको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘कस्तो अन्याय प्रेम र बिवाह गर्न दलितले नमिल्ने ?
‘फसाउँछौं भन्थे रे’
‘आयुशा फर्केर आइन् । तँ त्यसकोमा बस्ने भए हामीले कि त्यसलाई मार्छम्, कि फसाउँछम् । तँलाई त्यसको कुनै हालतमा हुन दिदैनौं । त्यो कुरा हेक्का राखेस् भनी उनलाई थर्काउँथे रे । अन्त्यमा भाइलाई झुठो आरोप लगाए र उनलाई लिएर गए’– पीडितकी दिदी दिलु बिकले भनिन्, ‘यो कस्तो पीडा हो ? कस्तो अन्याय हो ? बलात्कार, प्रेम र विवाह पनि प्रशासनले छुट्याउन नसक्ने ?’ झुठो आरोपमा पनि दलित गरिवलाई फसाउने । आफ्नो बोल्ने र अघि सर्ने, प्रहरी प्रशासनमा पहँच नहुनेलाई यस्तो हुँदोरहेछ ।’
उनले अगाडि थपिन, ‘केटीका आफन्तहरुले जाजरकोट जस्तै अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ला भनी धम्की समेत दिए ।’ दलितले प्रेम गर्दा ज्यानै गुमाउनुपर्ने, सजाय भोग्नुुपर्ने अझै रहेकाले दलित समुदायप्रतिको गैरदलितहरुको यस्तो गर्दा पनि दलित न्याय पाउनुको साटो उल्टै झुठो आरोप सहनुपर्ने बाध्यता खेप्नु परेको उनको भनाइ छ ।
‘मैले विवाह भनें, बाबुआमाले बलात्कार’
‘प्रहरी कार्यालयमा थियौं । वकिल आयो उजुरी लेख्दै थियो । एक ठाउँमा मैले बलात्कार भन्ने शब्द लेखेको देखें । मैले वकिललाई भनें मैले प्रेम पनि विवाह पनि गरेको हुँ । बाबुआमाले बलात्कार हो भन्नुहुन्छ । मेरा बाबुआमाले जातमा चित्त नबुझेकाले यस्तो गरेर फसाएका हुन्’– आयुशाले भनिन, ‘भिडियो समेत बनाउँदै उनले यस्तो नगर्न आफन्तलाई आग्रह गरेको सुनाइन् । आफन्तले जात नमिल्दा नै जबर्जस्ती झुठो आरोप लगाउँदै आफूहरुलाई छुटाएको केटाका आफन्तसँगको फोनसम्पर्कमा कुरा गरेकी बताइन् ।
यो प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो । गैरदलित र दलितहरुबीचको प्रेम सम्बन्ध पछिको बिवाहपछि धेरै दलितहरुले यस्तै पीडा भोगिरहेका छन् । दलितका सवालमा घटनाहरु तोडमोड भई प्रहरीसम्म पुु¥याउँदा दलितहरुले झुठो आरोपमा छुट्टिनुपर्ने मात्रै होईन सजायसमेत खेप्नु परिरहेको छ ।
प्रेम सम्वन्धपछिको बिवाहमा दलितमाथि जातीय प्रहार भएको दाङका अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ । घटना तोडमोड गरी दलितमाथि गैरदलितहरुले अन्याय गरेको आरोप अधिकारकर्मी तथा दलित अगुवाहरुको छ । प्रहरी प्रशासनले पनि उजुरीको आधारमा पक्राउ गरी दलितमाथि पनि अन्याय गरेको उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
प्रहरी प्रमुख भन्छन्, ‘हामीले हेर्ने उजुरी हो’
‘हामीले उजुरीमा के छ त्यो कसरी भयो भन्ने कुराको खोजी गर्ने हो तर उजुरीपश्चात घटना के र कस्तो पनि खोज्नुपर्ने भएकाले राजुको घटना अनुसन्धानका लागि अघि बढेको छ ।’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख गणेश चन्दले भने, ‘घटनाको छानबिन हुँदैछ । दोषी ठहर भए कारवाही हुन्छ । निर्दाेषलाई सजाय दिने काम प्रशासनले गरेको छैन ।’ पीडितको निवदेनका आधारमा विकलाई पक्राउ गरिएको उनले बताए । अहिले मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको छ ।